अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै* पुरा पढनुहोस – News543Online
March 7, 2021 adminLeaveaComment on अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै* पुरा पढनुहोस
अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै अन्ततः रहेनन कन्चन,लाख कोसिस गर्दापनि बचा*उन सकिएन !kanchan timilsina आज यो संसार छोडेर बिदा भए कञ्चन सवै नेपालि लाई रु’वाउँदै* काठमाण्डाैंकाे गोँगबु बसपार्क एरिया स्विप अपरेशनपछि भक्तपुरका विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरबाट अनैतिक कार्य गर्ने १६ जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले ती स्थानमा छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अनैतिक कार्य भइरहेको सूचनाका आधारमा छापा मा रेर ८ पुरुष र ८ जना महिलालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रमुख डीएसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिए।
जगाती क्षेत्रका होटल छाडा यौन संस्कृतिको अखडा बन्न थालेपछि प्रहरीले विशेष शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेर ‘स्विप अपरेसन’ चलाएको डीएसपी जोशीको भनाइ छ। जोशीका अनुसार, पिसफुल, प्याराडाइज, कस्तुरी खाजाघर, ए-वान र थकाली खानाघरबाट उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा पुष्कर बुढाथोकीले लेखेका छन्।नियन्त्रणमा लिएकाहरू महिला तथा पुरुषहरुलाई प्रहरी सामाजिक मनोपरार्मश समेत दिइने भएको छ। उनीहरुलाई पहिलो पटक चेतावनी दिएर छाडिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दुनियाँभरका मान्छे शारीरिक अभ्यासका लागि अलग अलग विधिहरू अपनाउने गर्छन् । कसैले नियमित साइक्लिङलाई नै आफ्नो शारीरिक अभ्यासको साधन बनाउने गर्छन् भने कसैले नियमित दौडिएर अभ्यास गर्ने गर्छन् । मान्छेहरू व्यायाम पनि घरभित्र गर्ने कि बाहिर भन्नेमा मुलुक र भूगोलको आधारमा रोजाइ फरक फरक हुने गर्छ । शारीरिक व्यायाम सबैतिरका मान्छेले गर्छन् । तर ठाउँ अनुसार विधि भने फरक हुने गर्छ । घरभन्दा बाहिर गएर शारीरिक अभ्यास गर्ने काम धनी मुलुकदेखि गरिब मुलुकसम्मका सबैले गर्ने गर्छन् । वर्कआउटको शैली संसारभर समान खालको छ । तर मुलुक अनुसार फरक फरक प्राथमिकता भने रहेको हुन्छ । भूगोल अनुसार भिन्दाभिन्दै खालको अभ्यासका उदाहरणहरू निम्नानुसार छन् ।
हे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो) rip
हार्दिक श्रद्धाञ्जली नानी तिम्रो आत्माले सान्ती पावोस; नदेखे झैं नगर्नु होला नानीको लागि श्रद्धान्जली दिनुहोला